म आफ्नो काममा असाध्यै व्यक्त थिएँ !मेरो श्रीमानले के गरिरहेका छन् थाहै भएन : शिल्पा शेट्टी « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्र पोर्नोग्राफी केसमा पक्राउ परेका छन् । पछिल्लो सयमा कुन्द्रामाथी प्रहरीले अनुसन्धान गरी रहेको छ । राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफी केसमा मुम्बई क्राइम ब्रान्चले २३ जुलाईमा शिल्पा शेट्टीको बयान दर्ता गरेको थियो ।
शिल्पाले प्रहरीलाई दिएको बयानको विस्तृत जानकारी प्राप्त गरेको भन्दै उनले प्रहरीसमक्ष के–कस्ता कुरा गरेकी थिइन् भनेर एक भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ ।
उक्त सञ्चार माध्यमका अनुसार आफ्नो बयानमा शिल्पा शेट्टीले सन् २०१९ मा कुन्द्राले कम्पनी आर्म्सप्राइम मिडिया जोइन गरेको बताइन् ।स्रोतले बताए अनुसार राजले त्यतिबेला शिल्पालाई कामथ छुट्टै गहना वशिष्ठसँग काम गर्ने र पार्ने भिडियो बनाएर त्यसलाई बेच्ने गरेका कारण उनी पक्राउ परेको बताएका थिए ।
यो कम्पनी पूनम पाण्डे जस्ता ती नायिकाको उत्तेजक भिडियो अपलोड गर्ने गर्दथ्यो । यसलाई उनीहरुले आफ्नो मर्जीले बनाउने गर्दथे ।शिल्पाले आफूले आरोपी उमेश कामथलाई चिन्ने बताएकी थिइन् किनभने उनी उनको कम्पनी वियान इन्डस्ट्रिजमा काम गर्दथे । फेब्रुअरीमा जब उनी पक्राउ परेका थिए तब शिल्पाले राजसँग उनीबारे कुरा गरेकी थिइन् ।शिल्पाले आफ्नो बयानमा उनलाई एप्लिकेशन बलीफेमबारे केही पनि थाहा नभएको बताइन् ।
शिल्पाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वियान इन्डस्ट्रिजमार्फत् हटशट एप बनाइएको थियो भनेर मलाई बल्ल थाहा हुँदैछ र पोर्न भिडियो यसमार्फत् नै बनाइन्थ्यो । जुन प्रदीप बक्शीको कम्पनी केनरिनलाई बेचिएको थियो । म आफ्नो काममा असाध्यै व्यक्त थिएँ र म मेरो श्रीमानलाई के गरिरहेको छौ भनेर सोध्ने बानी पनि थिएन । उनले मलाई आफ्नो कामबारे कहिल्यै केही पनि बताउँदैनथे । मलाई यसबारे केही पनि थाहै छैन । ’
शिल्पा शेट्टीले लण्डनमा बिग ब्रदरको सुटिङ गरिरहेका बेला साथी फारत हुसैनमार्फत् राज कुन्द्रासँग भेट भएको बताइन् । सन् २००९ मा उनीहरुको सम्बन्ध विवाहमा परिणत भएको थियो । त्यतिबेला देखि नै उनीहरु भारतमा बसिरहेका छन् र थुप्रै व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
आर्यनलाई गिरफ्तारपछि पहिलो पटक आर्थर रोड जेलमा भेट्न पुगे शाहरुख !
बलिउड अभिनेता शाहरुख खान आज बिहिबार ड्रग्स प्रकरणमा जेलमा रहेका छोरा आर्यन खानलाई भेट्न आर्थर
किन लिए सलमान खानले महंगो भाडामा अपार्टमेन्ट ?
बलिउडका चर्चित अभिनेतामध्ये सलमान खान पनि एक हुन् । उनी बलिउडमा सबैभन्दा धेरै कमाउने कलाकार
अक्षय कुमारको ‘गोरखा’ चलचित्रको फस्ट लुक पोस्ट रिलिज
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको तेस्रो चलचित्र ‘गोरखा’ को फस्ट लुक पोस्ट रिलिज भएको छ ।
२ सय करोड ठगी मुद्दामा तानिए अभिनेत्री ज्याक्लिन र नोरा, सोधपुछका लागि बोलायो ईडीले
बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डेज र नोरा फतेही ठगी र फिरौती आरोपमा घटना तानिएका छन् ।
शाहरुखका छोराआर्यनको ड्रग्स प्रकरण थप जटिल बन्दै, एनसीबीद्वारा ड्राइभरसँग सोधपुछ !
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानको ड्रग्स प्रकरण झन जटिलता तिर गइरहेको छ ।
फेक भिडियो देखाएर जब १५ वर्षका आर्यनलाई भाई अबरामको ‘पिता’ भनेपछि…!
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान अहिले जेल जीवन विताइरहेका छन् । शुक्रबार मुम्बइस्थित